Efeziana 6 - Ny Baiboly
10Farany, ry rahalahy, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny heriny mahefa ny zavatra rehetra. 11Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, dia tsy hiraika amin'izay fanangolen'ny demony akory hianareo. 12Fa tsy amin'ny nofo aman-dra no iadiantsika, fa amin'ny fanapahana, amin'ny fahefana, amin'ny andrian'izao tontolo izao, amin'ny fanahy ratsy eny ambony eny. 13Koa raiso avokoa àry ny fiadian'Andriamanitra, mba hahazoanareo manohitra amin'ny andro ratsy, dia hijoro tsara hianareo rahefa niala nenina. 14Aza miraika, fa sikino fahamarinana ny valahanareo, tafio ny rariny ho fiarovan-tratra, 15kiraroy fahavononan-kitory ny Evanjelim-pihavanana ny tongotrareo; 16fanampin'ireo rehetra ireo, dia ny finoana no raiso ho ampinga hamonoanareo ny tsipik'afo rehetra alefan'ilay ratsy. 17Raiso koa ny fanantenam-pamonjena ho fiarovan-doha, ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. 18Ataovy lalandava ao amin'ny Fanahy ny fangatahana amam-pifonana rehetra, amin'izany dia miambena amin'ny faharetana rehetra, sy amin'ny fivavahana ho an'ny olona masina rehetra; 19dia ho ahy koa, mba homena ahy ny hiloa-bava an-kasahiana, hampahafantatra ny hevi-miafina ambaran'ny Evanjely, 20(izay anaovako ny raharahan'ny ambasadaoro eo am-pigadrana), dia hitory azy tsy aman-tahotra araka izay mety hataoko aho.
23Fiadanana anie ho an'ny rahalahy, ary fitiavana amam-pinoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa-Kristy Tompo! 24Fahasoavana anie ho an'izay rehetra tia an'i Jesoa-Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy lefy! >